राष्ट्रपतिको संयमित कदम – MySansar
राष्ट्रपतिको संयमित कदम
राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यकारी अधिकारै आफ्नो हातमा लेला कि? नयाँ सरकार बनाउन आह्वानै गर्ला कि भन्ने शंकाहरुबीच आज एउटा संयमित विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। कङ्ग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनावको घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै आएका थिए र रातारात राष्ट्रपति भवनमा समेत पुगेका थिए। उनीहरुको शायद यस्तो आशा थियो- संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री संविधान सभा सदस्य रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पद स्वतः खाली हुन्छ। त्यसको हैसियत काम चलाउ हुन्छ र कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिको भएपछि उनीबाट अर्को सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान हुनेछ। तर त्यसो भएन। उनले संविधान अनुसारै एउटा संयमित कदम चालेका छन् र भनेका छन्- प्रधानमन्त्रीको हैसियत कामचलाउ मात्र छ। राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै अब प्रधानमन्त्री स्वतः खाली भएको भन्ने तर्क खारेज भएको छ। स्वतः हुने कामचलाउ हैसियत मात्रै राष्ट्रपतिले सम्झाएका छन्। बिर्सनु हुन्न कि यस्तै कामचलाउ सरकार माधवकुमार नेपालको सहमति नहुन्जेल नौ महिनासम्म चलेको थियो। त्यतिबेला त संसद थियो र संसदमा चुनाव गरी नयाँ सरकार बनाइएको थियो। अहिले त संसदै छैन। त्यसैले बाबुराम भट्टराईको सरकार अर्को चुनाव भएर संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनियुन्जेल जारी हुनसक्ने देखियो। यदि अघि नै हुने भए राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो। राष्ट्रिय सहमति नभई यो सरकारलाई हटाउने अब कुनै वैधानिक उपाय छैन।
राष्ट्रपतिको वक्तव्यमा स्पष्ट भनिएको छ- ‘देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभएको छ।’
लोकतान्त्रिक विधि भनेको चुनाव हो र चुनाव गर्नलाई संसद नै छैन।
कामचलाउ सरकारले चुनावको घोषणा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा समयसहित कहिले के पत्र आएको भन्ने लेखिएको छ। राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको।
यो हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भंग हुनु अघि अर्थात् कामचलाउ हुनुअघि नै संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन्। संविधान सभा भंगै नभई संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्न पाइन्छ त ? सर्वोच्चको गत मंसिर ९ गतेको फैसलाले निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्ने स्थिति देखिए त्योभन्दा अघि नै जनमत संग्रह वा नयाँ चुनाव वा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। त्यस हिसाबले संविधान सभा भंगै नभई स‌ंविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्न पाइन्न भन्ने तर्क सर्वोच्चको फैसलाविपरीत छ।
निर्वाचनको मिति राष्ट्रपतिले किन घोषणा गरेनन् भन्ने प्रश्नमा संविधानको धारा ६३ मा नेपाल सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने भनिएको छ। त्यसको बोधार्थ मात्रै राष्ट्रपतिलाई दिने हो।
निर्वाचन घोषणा संवैधानिक असंवैधानिक भन्नेमा त सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ। त्यसबारे अदालतले नै फैसला गर्ला। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन भने अब उही नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा खुइलिसकेको शब्द सहमति, सहकार्य बिना कुनै बाटो छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य
1 thought on “राष्ट्रपतिको संयमित कदम”
Pingback: लौ आयो राष्ट्रपतिको ‘कदम’, म‍ंसिर १४ भित्र सहमति गर्न अल्टिमेटम « Mysansar